डिजाइन तपाइँको ब्रान्ड को मौन राजदूत हो Martech Zone
एक प्रभावशाली डिजाइन तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु लाई मात दिन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यस अनुसार डिजाइन प्रबन्ध संस्थान, एक आकर्षक डिजाइन को लागी छनौट गर्ने कम्पनीहरु एस एण्ड पी सूचकांक मा कमजोर डिजाइन संग अन्य कम्पनीहरु लाई २१%%ले हराएको देखियो।
अर्कोतर्फ, टाइटन मिडिया को सर्वेक्षण यो पनि निष्कर्ष निकालेको छ कि 48% व्यक्तिहरु यसको वेबसाइट डिजाइन को माध्यम बाट एक व्यापार को विश्वसनीयता निर्धारण गर्दछ। यी तथ्याats्क प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर को विचार संग प align्क्तिबद्ध, पॉल Rand जो तपाइँको ब्रान्ड को मौन राजदूत को रूप मा डिजाइन को विचार।
यसबाहेक, डिजाइन एक सुसंगत दृश्य भाषा र तपाइँको उत्पादनहरु वा सेवाहरु को लागी तत्काल जडान, तपाइँको ब्रान्ड को विश्वसनीयता र मान्यता लाई बढावा दिन्छ। एक कम्पनी मालिक को रूप मा, तपाइँ एक स्थायी छाप बनाउन को लागी आवश्यक छ। त्यो हो जहाँ डिजाइन मा आउँछ र तपाइँ संलग्न र तपाइँको ग्राहकहरु वा लक्षित दर्शकहरु लाई उत्तेजित गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ।
एक राम्रो डिजाइन typefaces, रंग योजना, लोड समय, र मोबाइल को अनुकूल सुविधाहरु को हुन्छन्। यी कारकहरु लाई तपाइँको वेबसाइट मा अधिक ट्राफिक प्राप्त गर्ने संभावनाहरु लाई बढाउन सक्छ।
किन डिजाइन महत्त्वपूर्ण छ?
एक व्यक्तिको आँखा मात्र आवश्यक छ 2.6 सेकेन्ड एक वेबपेज को एक विशेष तत्व मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी, विज्ञान र टेक्नोलोजी मिसौरी विश्वविद्यालय बाट शोधकर्ताहरु निष्कर्ष निकाले। एक उपयोगकर्ता को अनुकूल डिजाइन आफ्नो राय लाई प्रभावित गर्न को लागी सम्भव छ।
मानिसहरु लाई तपाइँको कम्पनी को बारे मा अनुभवहरु मा आधारित छ कि उनीहरु संग एक ब्रान्ड संग भएको छ आधारित छ। एक राम्रो डिजाइन गरीएको लोगो र वेबसाइट विश्वास लाई प्रेरित गर्दछ किनकि यो पेशेवर देखिन्छ। यदि एक कम्पनी को उपयोग गर्न को लागी सजिलो छ कि एक सफा र कार्यात्मक डिजाइन बनाउन मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी तैयार छ, तब त्यो के हो कि उनीहरुको उत्पादन को उपयोग को जस्तै हुन सक्छ को एक सूचक हुन सक्छ।
एड्रियाना मारिन, स्वतन्त्र कला निर्देशक
एक राम्रो डिजाइन सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका मा तपाइँको सन्देश बताउँछ:
राम्रो डिजाइन तपाइँको सन्देश संवाद गर्न मा मद्दत गर्दछ, मार्केटि chat च्याटर को माध्यम बाट काट्न को लागी तान्छ, र सटीक बजार को लागी तपाइँ पहुँच गर्न को लागी कोशिश गरीरहनुभएको छ को लागी सबै भन्दा प्रभावी ढंगले जानकारी को व्यवस्था गर्दछ। प्रभावकारी डिजाइन र सन्देश संगै काम गर्न को लागी तपाइँको व्यापार को मूल्य स्पष्ट रूप मा व्यक्त गर्न को लागी, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यादगार रूप मा।
Lilian Crooks, ग्राफिक डिजाइनर र Harcum कलेज मा संचार विशेषज्ञ
जान्नुहोस् कि राम्रो डिजाइन वेबसाइट वा मा सीमित छैन लोगो। तपाइँ प्याकेजि or्ग वा उत्पादन डिजाइन को रूप मा राम्रो संग ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी आवश्यक छ। जब तपाइँका उत्पादनहरु तपाइँको सन्देश संवाद, तपाइँको मानहरु लाई परिभाषित र तपाइँको लक्षित दर्शकहरु को लागी अपील, तपाइँ एक भयानक ब्रान्ड को विकास को संभावना हो।
राम्रो डिजाइन तपाइँ बाहिर उभिन मद्दत गर्दछ
डिजाइन बनाउन वा तपाइँको व्यापार भंग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो सम्मोहक र कार्यात्मक छ, तपाइँ प्रतियोगीहरु को बीच बाहिर खडा हुन सम्भव छ। यो कुनै गोप्य छैन कि मानिसहरु आधुनिक र प्रभावशाली डिजाइनहरु संग उत्पादनहरु को लागी गुरुत्वाकर्षण।
उदाहरण को लागी, तपाइँ अन्ततः एक विशिष्ट उत्पादन कि अभूतपूर्व डिजाइन र आधुनिक प्याकेजि features्ग सुविधा को लागी आकर्षित हुनेछ। मानिसहरु अक्सर सौन्दर्य को लागी पक्षपाती राय राख्छन्।
मानव जाति एक आकर्षक पूर्वाग्रह छ; हामी राम्रो चीजहरु लाई राम्रो भएको भनी बुझ्दछौं, चाहे त्यो राम्रो होस्। अरु सबै बराबर हुन, हामी सुन्दर चीजहरु मनपर्छ, र हामी विश्वास गर्छौं कि सुन्दर चीजहरु लाई राम्रो संग कार्य गर्दछ। प्रकृतिको रूपमा, प्रकार्य फाराम पछ्याउन सक्छ।
स्टीवन ब्राडली, लेखक डिजाइन आधारभूत
यसबाहेक, एक अध्ययनले यो पनि सुझाव दिएको छ कि तपाइँ ५० मिलिसेकेन्ड भित्र दृश्य अपील आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। एक डिजाइनर को रूप मा, तपाइँ एक छाप बनाउन को लागी ती ५० मिलिसेकेन्ड भित्र ध्यान कब्जा गर्न को लागी तपाइँ को हुनुहुन्छ र तपाइँ के गर्नुहुन्छ।
तपाइँ कस्मेटिक ब्रान्डहरु लाई हेरेर अवधारणा बुझ्नुहुनेछ; शारीरिक रचना र सेटाफिल.
Cetaphil एक सरल, र scheme्ग योजना र कुनै रमाईलो उत्पादन नामहरु को उपयोग गर्दछ, एक गंभीर स्वर सेट। उत्पादन लाइन प्रदर्शन गर्न को लागी डिजाइन गरीएको थियो कि ब्रान्ड सबै उत्पादन र यसको कार्यक्षमता को बारे मा छ। जबकि, Anatomicals हास्य उत्पादन नाम र ठूलो फन्ट प्रकार को लागी छनौट गर्दछ।
उनीहरु जीवन्त रंगहरु को उपयोग र एक हल्का मन टोन सेट। तपाइँ पनि प्रमुख कारकहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरु तपाइँको उत्पादन डिजाइन मा प्रतिबिम्बित हुन्छन्।
डिजाइन ब्रान्ड संगति बढावा दिन्छ
के तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि गुगल एक श्रापित फन्ट वा एक गुलाबी म्याकडोनाल्ड को लोगो को उपयोग गरी खोज परिणामहरु प्रदर्शन गरीरहेको छ? हामी बुझ्छौं कि ती परिवर्तनहरु को बारे मा सोच्न गाह्रो छ।
गुगल लेआउट र म्याकडोनाल्ड लोगो डिजाइन तत्वहरु भन्दा बढी छन्; उनीहरु आफ्नो ब्रान्ड को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो र ब्रान्ड स्थिरता को एक महान उदाहरण हो।
संगति आवश्यक छ जब तपाइँ एक एकजुट ब्रान्ड निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ। यो तर्कसंगत कुञ्जी नियम हो कि तपाइँको ब्रान्ड को सफलता सुनिश्चित गर्दछ।
दुबै aforementioned ब्रान्ड एक सुसंगत ब्रान्ड यादगार तत्वहरु को निर्माण मा ध्यान केन्द्रित।
अधिकतम सगाई को लागी नेतृत्व गर्दछ कि ब्रान्ड मान्यता लाई बढावा दिन्छ।
ब्रान्ड मूल्य बढाउँछ कि बिक्री बढाउन सक्छ।
तपाईंलाई उद्योग मा बाहिर उभिन मद्दत गर्दछ।
अर्कोतर्फ, एक असंगत ब्रान्ड अराजक, अव्यवस्थित र भ्रामक देखिन्छ। यसले तपाइँको ब्यापार को विश्वसनीयता लाई कमजोर बनाउन सक्छ र तपाइँको सफलता को संभावनाहरु लाई सीमित गर्न सक्छ।
यसबाहेक, तपाइँ तपाइँको ब्रान्ड लाई तपाइँको कम्पनी को सार्वजनिक पहिचान को रूप मा विचार गर्न को लागी आवश्यक छ। तेसैले, यो तपाइँको कम्पनी वा व्यवसाय को सबै भन्दा राम्रो गुणहरु लाई दर्शकहरु लाई संलग्न गर्न को लागी प्रदर्शन गर्नु पर्छ।
साथै, तपाइँको लोगो लाई गलत ढंगले प्रयोग गरीरहेको छ वा यसको रंगहरु लाई ढिलो गरी अनुकूलित गरीएको छ यो असंगति को लागी नेतृत्व गर्दछ। मानिसहरु एक असंगत ब्रान्ड बिर्सन्छन्। किनकि उनीहरु एक विशेष रंग वा प्रतीक को बारे मा सोच्न सक्दैनन् जब उनीहरु यसको बारे मा कुरा गर्छन्।
उदाहरण को लागी, जब को बारे मा कुरा गर्दै कोकाकोला, तपाइँ चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ कि यसको लोगो यो रातो रंग छ। र जब तपाइँ पार आउनुहुन्छ नाइके लोगो, तपाइँ यसलाई एक जुत्ता वा परिधान निर्माण ब्रान्ड को रूप मा पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
तेसैले, यदि तपाइँको लक्षित दर्शकहरु तपाइँको ब्रान्ड संग विशेष रंगहरु लाई सम्बद्ध गर्न सक्दैनन् वा यसको लोगो को पहिचान गर्दैनन्, तपाइँ डिजाइन मा काम गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ, र यो लगातार बनाउन को लागी कि तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सजीलै संग यो पहिचान गर्न सक्छन्।
गार्नेर ग्राहक ट्रस्ट प्रयोगकर्ता मैत्री वेबसाइट डिजाइन संग
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि केहि मानिसहरु एक वेबसाइट संग पहिलो पटक को लागी एक वेबसाइट संग कुराकानी। तेसैले, छाप तपाइँको वेबसाइट छोड्छ अविश्वसनीय रूप मा महत्वपूर्ण छ। एक राम्रो वेबसाइट डिजाइन तपाइँको वेबसाइट आगन्तुकहरु मा एक स्थायी प्रभाव छोड्न मद्दत गर्न सक्छ।
खराब डिजाइन संग वेबसाइटहरु भरोसा वा समय को कुनै लम्बाई को लागी भ्रमण गरीएको छैन।
खराब इन्टरफेस डिजाइन विशेष गरी छिटो अस्वीकार र एक वेबसाइट को अविश्वास संग जोडिएको थियो, "थपे," जसमा सहभागीहरु लाई डिजाइन को केहि पहलू मन परेन साइट मा अक्सर होमपेज भन्दा अगाडी अन्वेषण गरीएको थिएन र मा पुन: समीक्षा गर्न को लागी उपयुक्त मानीदैन। पछि मिति ... "
CrazyEgg, राम्रो वेब डिजाइन साँच्चै मामिला छ?
पुरानो स्टक वेबसाइट
नयाँ निजीकृत वेबसाइट
यो मध्य इंडियाना मा छत ठेकेदार पछिल्लो वर्ष मा आफ्नो पुरानो साइट बाट एक एकल योग्य नेतृत्व प्राप्त गरेनन्। नयाँ साइट, डिजाइन र द्वारा विकसित Highbridge एक दर्जन भन्दा बढि योग्य लीड उत्पादन गरीरहे पछि प्रत्येक महिना - उही यातायात संग। निजीकरण, भरोसा संकेतक, वास्तविक फोटोग्राफी, र एक मानव संचालित च्याट को पेशकश को सेवा को कुनै संदेह संग आगन्तुकहरु लाई सीधा बोल्छ।
आकर्षक प्याकेजि Design्ग डिजाइन संग ग्राहकहरु लाई प्रभावित गर्नुहोस्
तपाइँको उत्पादनहरु वा सामानहरु को प्याकेजि design्ग डिजाइन वेबसाइट डिजाइन को लागी धेरै समान छ। तपाइँको उपभोक्ताहरु उत्पादन वा सेवा को लागी भुक्तानी र दुबै परिदृश्यहरुमा प्याकेजि by्ग द्वारा प्रभावित।
यसबाहेक, पलक - माल्कम Gladwell द्वारा एक किताब विस्तार मा बिन्दु मा चर्चा छ कि थप वा प्याकेजि design्ग डिजाइन मा थोरै tweaks उत्पादन को बारे मा ग्राहक को धारणा आकार गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, उनीहरु को उत्पादन को संयोजन को रूप मा विचार गर्नुहोस् प्याकेजिङ्ग र उत्पादन।
यदि तपाइँ 15 यूपी प्याकेजि on्ग मा हरीयो को लागी7प्रतिशत अधिक पहेंलो जोड्नुहुन्छ, मानिसहरु लाई रिपोर्ट छ कि यो अधिक चूना वा नींबू स्वाद छ, भले ही पेय आफैं छोडिएको थियो। शेफ Boyardee रविओली को एक क्यान मा, एक वास्तविक मानव अनुहार को एक नजिक को तस्वीर एक पूर्ण शरीर शट वा एक कार्टून चरित्र भन्दा कथित गुणवत्ता लाई प्रभावित गर्दछ ... र Hormel लोगो मा, 'आर' र बीच अजमोद को एक टहनी जोड्दै 'm' को कारण ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु लाई अधिक ताजा भएको अनुभव गर्न को लागी।
यी उदाहरणहरु देखाउँछन् कि प्याकेजि customer्ग ग्राहकहरु को छाप, गुणस्तर र एक उत्पादन को स्वाद पनि प्रभावित गर्दछ। यदि तपाइँ नजिक बाट अवलोकन गर्नुहुन्छ,7यूपी उदाहरण बताउँछ कि ग्राहकहरु एक विशिष्ट रंग र यसको लागी अवचेतन प्रतिक्रियाहरु को लागी विभिन्न संघहरु छन्।
तेसैले, गणना डिजाइन निर्णय बनाउन कसरी तपाइँको ग्राहक आधार देख्न, बुझ्न र तपाइँको उत्पादन को उपभोग गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी ब्रान्ड प्रयोगकर्ता सगाई बढाउन को लागी आफ्नो लोगो परिवर्तन गर्नुहोस्
ब्याटमैन लोगो इतिहास
धेरै प्रसिद्ध हास्य पुस्तक पात्रहरु आफ्नै अधिकार मा एक ब्रान्ड हो, विशेष गरी ती जो पूरै सिनेमाई फ्रेन्चाइजीहरु को आसपास बनेका छन्। सबैभन्दा प्रतिष्ठित मध्ये एक सुपर हीरो लोगो कि ब्याटम्यान द्वारा खेलिएको छ। उडान मा एक ब्याट को प्रसिद्ध प्रतीक यसको स्थापना पछि केहि पटक पुन: डिजाइन गरीएको छ, नयाँ लोगो २००० मा जारी गरीएको छ चरित्र को साँचो, कालो प्रकृति को प्रदर्शन संग।
एक लोगो डिजाइन संग ब्रान्ड पहिचान बढाउनुहोस्
एक लोगो सधैं कुनै पनि ब्रान्ड को एक महत्वपूर्ण तत्व हो। यसको डिजाइन बाध्यकारी अझै व्यावसायिक हुन आवश्यक छ। धेरै व्यवसायहरु राम्रो सोच र आकर्षक लोगो डिजाइन को मूल्य पहिचान गर्न असफल। उनीहरु प्राय पूर्व-निर्मित लोगो को लागी जान्छन् वा यो आफैं गर्न को लागी एक दृष्टिकोण को लागी छनौट गर्नुहोस्।
यसबाहेक, एक लोगो डिजाइन उज्ज्वल रंग र अद्वितीय टाइपोग्राफी को छनौट को बारे मा छैन। तर यो तपाइँको ब्रान्ड प्रतिबिम्बित गर्न को लागी, तपाइँको ब्यापारिक सन्देश संचार गर्न को लागी, सही फन्ट र रंग प्यालेट छ। यो सत्य हो कि एक महान लोगो तपाइँको व्यापार र मूल्यहरु को साँचो तस्वीर प्रदर्शन गर्दछ।
एक सरल, लगातार, र यादगार लोगो लाभदायक हुन सक्छ। यदि तपाइँ एक ब्रान्ड शुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँको अवस्थित लोगो को लागी एक नयाँ आयाम सम्मिलित गर्न को लागी योजना बनाइरहनुभएको छ, तपाइँ प्रवृत्तिहरु, तपाइँको ब्रान्ड पहिचान र मूल्य मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाइँको लोगो तपाइँको ब्रान्ड को आसपास तपाइँको लक्षित दर्शकहरु को रुचि को विकास गर्दछ।
उदाहरण को लागी FedEx को लोगो लिनुहोस्। सुन्तला र बैजनी रंग को उपयोग सकारात्मकता र जीवन्तता को शामिल। यदि तपाइँ नजिकबाट अवलोकन गर्नुहुन्छ, अक्षर E र X बीच देखाइएको तीर अगाडि बढ्न बताउँछ।
तपाइँ पनि यस्तो महत्वपूर्ण तत्वहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुलाई तपाइँको लोगो मा बुद्धिमानी संग एक अवचेतन उपस्थिति बनाउन को लागी, विशेष गरी यदि तपाइँको ब्रान्ड एक कूरियर वा रसद उद्योग संग सम्बन्धित छ। तर सिक्न को लागी कसरी एक लोगो को प्रतिलिपि अधिकार पायरेटेड हुन बाट बचाउन को लागी यो नबिर्सनुहोस्।
रंग संग डिकोड ब्रान्ड सन्देश
के तपाइँ कहिल्यै सोच्नुभएको छ किन विशेषज्ञहरु सही रंग योजना छनौट मा जोड दिन्छन्? यी रंगहरु तपाइँको सन्देश को अनुवाद र ब्रान्ड को मान्यता लाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँ होशियारी संग छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँको लोगो को रंग प्यालेट भावनाहरु को सही प्रकार evoking मा मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, लुई Vuitton आफ्नो लोगो मा कालो रंग को उपयोग गर्दछ कि यो एक प्रीमियम र लक्जरी ब्रान्ड बनाउँछ।
सही फन्ट छान्नुहोस्
फन्ट तपाइँको लोगो को पहिचानकर्ता हो र एक निश्चित उद्देश्य छ। तपाइँ फन्ट को तपाइँको चयन मा रचनात्मक हुन सक्छ। तर यो एक लोगो मा एक फन्ट प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
जब तपाइँको लोगो को लागी फन्ट छनौट, थाहा छ कि बोल्डहरु लाई मर्दाना फन्ट मानिन्छ र श्रापित फन्टहरु लाई महिला फन्ट को रूप मा जानिन्छ।
तपाइँ गोलाकार टाइपफेस को उपयोग को बारे मा सोच्न सक्नुहुन्छ किनकि उनीहरु हेरचाह, कोमलता र कोमलता को चित्रण गर्छन्।
आकार प्रभाव मा फोकस गर्नुहोस्
के तपाइँ जान्दछन् कि तपाइँको लोगो को आकार तपाइँको ब्रान्ड को अर्थ मा सुधार गर्ने क्षमता छ?
BMW लोगो को व्याख्या
उदाहरण को लागी, गोलाकार डिजाइन सकारात्मकता, समुदाय, सहनशीलता वा यहाँ सम्म कि स्त्रीत्व प्रतिबिम्बित गर्दछ जबकि वर्ग डिजाइन वा कडा र तीक्ष्ण किनारहरु संग शक्ति, व्यावसायिकता, सन्तुलन र दक्षताको सन्देश पठाउँछन्।
अर्कोतर्फ, त्रिकोण डिजाइन शक्तिशाली, कानूनी वा वैज्ञानिक विचारहरु व्यक्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
डिजाइन तपाइँको लक्षित श्रोता लाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ
के तपाइँ एक फरक बजार लक्षित गर्न चाहानुहुन्छ? तपाइँको अवस्थित प्याकेजि twe्ग tweaking प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ एक ब्रान्ड को मालिक हुनुहुन्छ कि विशेष रूप देखि महिलाहरु को लागी छाला हेरचाह उत्पादनहरु उत्पादन, तपाइँ अझै पनी पुरुष बजार लाई लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको डिजाइन को लागी प्रमुख विकल्प बनाउन को लागी कुनै आवश्यकता छैन। र मर्दाना जनसांख्यिकी को लागी अपील गर्न को लागी, तपाइँ साधारण डिजाइन परिवर्तन को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, Nivea महिलाहरु को लागी क्रीम, लोशन वा दुर्गन्ध सहित व्यक्तिगत हेरविचार उत्पादनहरु को एक दायरा प्रदान गर्दछ। साथै, ब्रान्ड एक तेज र मर्दानी डिजाइन को उपयोग गरेर पुरुष जनसांख्यिकीय लक्षित गरेर आफ्नो बजार विविधता गर्न सफल भयो।
अनुसार डिजाइन काउन्सिल अध्ययन, डिजाइन चेतावनी व्यवसायहरु को लागी नयाँ कारकहरु वा सेवाहरु लाई दोब्बर बनाउन को लागी व्यापार को तुलना मा डिजाइन कारक मा ध्यान केन्द्रित नगर्ने सम्भावना छ। तेसैले, सोच्नुहोस् जहाँ तपाइँ केहि शैलीगत समायोजन गरेर तपाइँको ब्रान्ड लिन सक्नुहुन्छ।
डिजाइन मा लगानी
कुनै संदेह छैन, डिजाइन तपाइँको व्यापार वा ब्रान्ड मा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ। यो स्पष्ट छ कि एक राम्रो डिजाइन प्रतिस्पर्धी किनारा, रोमाञ्चक बजार परिणाम र तपाइँ भीड बाट बाहिर खडा बनाउन सहित विभिन्न फाइदाहरु, ल्याउँछ।
तपाइँको ब्रान्ड को एक राजदूत को रूप मा, डिजाइन ग्राहक विश्वास, एक नयाँ बजार लक्षित, ब्रान्ड स्थिरता को बढावा, एक प्रभावशाली छाप बनाउन, र सफल अभियान शुरू, र अधिक मा मद्दत गर्दछ। तेसैले, यो डिजाइन र तत्वहरु कि यो सफल बनाउन मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। किनकी अत्याधुनिक डिजाइन मा लगानी को मतलब तपाइँको दीर्घकालीन सफलता मा लगानी।
प्रकटीकरण: यो लेख सम्बद्ध लि include्क को रूप मा साथै एक ग्राहक उदाहरण बाट सम्मिलित गर्न को लागी सम्पादन गरिएको थियो Douglas Karrफर्म छ, Highbridge.
टैग: एडोबएड्रियाना मरिनशारीरिककला निर्देशकब्याटमैन लोगो इतिहासब्रान्ड विश्वसनीयताब्रान्ड मान्यतासेटाफिलकोकाकोलारंग योजनाउपभोक्ता विश्वासडिजाइनआधारभूत डिजाइनडिजाइन व्यवस्थापन संस्थानडिजाइन अनुसन्धानडिजाइन अध्ययनगूगलगुगल ब्रान्डहर्कम कलेजलिलियन बदमाशलोगोलोगो र colorsहरूलोगो डिजाइनलोगो आकारmcdonald को लोगोमिसौरी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालयनाइकेपल रान्डउत्पाद डिजाइनस्टीवन ब्राडलीटाइपफेसटाइटन मिडियादृश्य भाषा
Anas हसन एक अग्रणी ब्रान्डि agency एजेन्सी मा एक डिजाइन सल्लाहकार हो लोगो Poppin। उहाँ ग्राफिक डिजाइन र डिजिटल मार्केटि of को प्रवृत्ति को अन्वेषण मा एक गहिरो रुचि छ। यस बाहेक, उहाँ एक उत्सुक फुटबल प्रशंसक हुनुहुन्छ र एक सामयिक स्टेक डिनर को आनन्द लिनुहुन्छ।